UNcikazi we-Arrows uthi bekumele bayithele ngehlazo lembudlu yamagoli iMaritzburg - Impempe
UNcikazi we-Arrows uthi bekumele bayithele ngehlazo lembudlu yamagoli iMaritzburg
January 31, 2021 Impempe.com
Abadlali neLamontville Golden Arrows bejabulela igoli kade behlula iMaritzburg United
Ukholelwa ekutheni bekufanele bayithele ngehlazo lembudlu yamagoli iMaritzburg United, umqeqeshi weLamontville Golden Arrows uMandla “Mhloli” Ncikazi owaqoqe egcwele amaphuzu emdlalweni woMkhaya baKwaZulu-Natal ngaphansi kweDStv Premiership eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont ngoMgqibelo.
Le wini ibeke Abafana Bes’thende endaweni yesithupha kwi-log lapho bebambene khona ngamaphuzu neCape Town City esendaweni yesihlanu.
UNcikazi ujabule ngamaphuzu agcwele kodwa ukholelwa ekutheni abafana bakhe bayiyekile iMaritzburg ikakhulukazi esiwombebni sesiibili.
Kuliqiniso nokho lokhu okushiwo yilo mqeqeshi kwazise esiwombeni sesibili uBongani Mpandle obesezintini zeTeam of Choice ebishaywa okwesithathu kulandelana kwiligi, uvimbe amabhola acela kwamahlanu lapho umdlali we-Arrows abesezihambela yedwa khona.
“Asizange neze siwuqale ngendlela ebesifisa kumbe esijwayele ukuqala ngayo lo mdlalo. Indlela yethu yokuliqala emuva ibhola ibingavumi.
“Kulapho izinto zethu eziqala khona. Ukuliqala emuva kwenza sikhethe ukuthi siya phambili ngamacala noma sibaqonda ngqo maphakathi nenkundla.
“Konke lapho besizama khona ukuqala belivele lonakale ibhola kumbe sibaphe lona. Igoli labo lingena nje kuyabonakala ukuthi bazolithola. Bekungavumi nje esiwombeni sokuqala kodwa kwesesibili ziqalile zahlangana izinto,” kusho uNcikazi.
Kubukeke sengathi kukhona akulungisayo uNcikazi ngemizuzu yokugcina esiwombeni sokuqala yingakho kungazange kwethuse ukuthi i-Arrows ibuye ngale ndlela ebuye ngayo.
“Nangesikhathi sekhefu bengingathukile. Ngibatshelile nabo abafana ukuthi uma bengeke baxhamazele kepha badlale leli bhola abaziyo nabo ukuthi bayakwazi ukulidlala bazowakha amathuba bawathole namagoli.
“Eqinisweni ngikholelwa ekutheni bekumele siyithele ngembudlu iMaritzburg. Sidlala ngendlela eyodwa ngakho bekumele ngibakhumbuze abafana ukuthi bangasuki kulokho. Nangempela siwakhile amathuba esiwombeni sesibili. Bekusifanele ukunqoba kulo mdlalo.”
Lo mqeqeshi uvale ngokuncoma indlela abadlali bakhe abangalijwayele ijezi abangene bazivala ngayo izikhala zalaba abebengekho.
Umdlalo olandelayo we-Arrows ungoLwesibili lapho izokwamukela khona i-Orlando Pirates ngo-5 ntambama, eClermont.
Previous Previous post: Uncoma ubuqhawe obukhonjiswe abadlali beBulls ishaya iSharks uJake White
Next Next post: Usanethemba lokuthi zizoji’zinto u-Anoma weChiefs